Curaaraha Laanta Socdaalka | LawHelp Minnesota
Curaaraha Laanta Socdaalka
Waa maxay curaarta laanta Socdaalku?
Curaartu waa lacag uu qof bixiyo si uu qof kale oo xiran loo sii daayo. Curaarta laanta socdaalku waa lacag qof bixiyo si qof looga sii daayo Laanta Socdaalka & Ilaalinta Kastanka (Immigration & Customs Enforcement, ama “ICE”). Hadii aad tagto dhamaan balamaha maxkamadahaaga aadna raacdo dhamaan amarada uu bixiyo xaakimka laanta socdaalku ama ay bixiso hay’ada ICE, oo ay ku jiraan ka bixida wadanka hadii la iska rabo, lacagta curaarta ah waxaa la soo celin kolka kiiskaagu uu dhamaado. Laakiin hay’ada ICE, iyada ayaa qaadan lacagta curaarta ah hadii aadan maxkamada tagin ama aadan raacin amarada.
Sidee ayaan u codsadaa curaar?
Marmarka qaarkood hay’ada ICE ayaa goysa cadadka lacagta curaarta ah. Hadii wax curaar ah aan la goyn, waxa aad ka codsan kartaa Xaakimka Laanta socdaalku in uu u gooyo curaar kiiskaaga. Waxa aad codsan kartaa dacwada curaar dhagaysiga. Xilliga dhagaysiga dacwada curaarta, waxaad sidoo kale waydiisan kartaa Xaakimka Laanta socdaalka inuu dhimo lacagta curaarta ah hadii aad qabto in hay’ada ICE curaarta ay goysay ay kugu badan tahay. Cadadka ugu yar ee lacagta curaarta ah ee uu Xaakim Laanta socdaalka ahi uu goyn karaa waa $1,500.
Ka taxadar kolka aad ka codsanayso Xaakimka Laanta socdaalka inuu dhimo curaarta. Xaakimku waxa uu go’aansan karaa inuu kordhiyo curaartaada hadii uu is yiraa aad bay u hooseeysaa.
Maxaa ka dhaca dacwada dhagaysiga goynta curaarta?
Mar ugu horeeysa, Xaakimka Laanta socdaalku waa inuu go’aansado inaad xataa xaq u leedahay inaad codsato curaarta iyo in kale. Dadka qaarkii waxay hoos yimaadaan sharciga “haynta khasabka ah.” Taa macnaheedu waa Xaakim Laanta Socdaalku uma laha awood uu ku ansaxin karo curuur. Dambiyada qaarkood, waxa ay ku hoos keeni karaan sharciga haynta khasabka ah. Waxaad sidoo kale aad hoos imaan sharciga haynta khasabka ah hadii:
Aad tahay qof qalaad oo hada yimi
Lagu siiyey amar hore oo maxkamadeed oo lagugu masaafurinayey, ama
Ama laguu hayo sababto la xiriira argagaxisanimo
Hadii aadan hoos imanayn sharciga haynta khasab ka ah, waxaa dhici karta in curaar laguu gooyo. Kolka uu go’aansanayo goynta ama dhimida curaarta, Xaakimka Laanta socdaalku waxa
uu eegaa arrintaada si uu arko inaad khatar ku tahay ummada iyo in kale ama in lagaaga “baqayo baxsi.” Qofka looga baqayo baxsigu waa qof ay u badan tahay in uusan imaan doonin dhagasiga dacwooyinkiisa mustaqbalka hadii la sii daayo iminka.
Si aad u cadeyso inaadan umadda khatar ku ahayn, bixi taariikhaada ah wixii dambi ah ee aad horey u gaysatay, iyo wixii daliilo ah ee muujinaya wixii dhaqan-celin ah ee aad sameysay. Waxaad kaloo bixin kartaa warqado gargaar oo ay kuu soo qoreen ehelkaa iyo saaxiibadaa ama hogaamiye diimeedyadu ama xubnaha bulshada.
Si aad u cadeyso inaadan baxsanayn, bixi:
cadeyno ah ehelka kuu joogo United States. Taasi waxa noqon kartaa warqada dhalashada ee Qaraabada Sharciga ku leh wadanka (LPR) ama muwaadiniinta ah (U.S.)
cadeyn ah inaad shaqayso. Sida Jeeg dabadood ama warqad shaqadu kuu soo qorto.
cadeyn ah inaad hanti ku leedahay United States
cadeyn ah inaad ka tirsan tahay koox diimeed ama mid beeleed.
Xaakim laanta socdaalku waxaa kale oo uu tixgeliyaa inaad codsanayso wax aad isaga difaacayo musaafurinta ama in wax codsiyo ah lagaaga xareeyey adiga laanta socdaalka.
Waa suurta gal in lagu sii daayo isla maalinta curaarta la dhigay. Si aad u hubiso in lagu sii daayo isla maalinta, waxaa fiican inaad dhigto curaarta maalinta gelinkeeda hore hadii ay suurta gal tahay.
Cadadka curaarta waa khasab in la wada dhigo, iyada oo ah jeega idman (money order) ee boostada (U.S.) ama jeega khasnajiga (cashier’s check) oo uu bixiyey bangi. Lacagta cadaan ah, jeegaga shakhsiganka ah ama jeegta idman ee aan ahayn kuwa boostada lama aqabalo. Jeega idman ama jeega khasnajiga waa in lagu qoraa “Immigration and Customs Enforcement.” Ehelkaa iyo saaxiibadaa waa inay lacagta gacanta ku geeyaan midkii ay rabaan xafiisyada hay’ada ICE ay ku leedahay wadanka U.S.
Hadii aad Minnesota joogto, Waxaa jira 2 xafiis oo ICE leedahay oo curaarta laga bixin karo:
Xafiiska ICE ee Minneapolis/St. Paul
7:30 sub., ilaa 3:00 gal., Isniin -Jimce
Xafiiska ICE ee Sioux Falls
8:00 sub., ilaa 1:00 gal., Isniin -Jimce
Qofka dhigaya curaarta waxaa la yiraa “waajible.” Waxaa jira xeerar ku saabsan cidda noqon karta waajible. Hadii waajiblahu uusan u hogaansamin xeerarka, hay’ada ICE kuma ay siidayso.
Waajiblahu waa khasab inuu si sharci ah ku joogo Mareykanka ( U.S.)
Waajiblahu waa khasab inuu ku yaqaan
Waajiblahu waa khasab inuu yaqaan sida loogu hadlo loona akhriyo Afka Ingiriiska.
Waajiblahu waa khasab inuu la yimaado aqoonsi (ID) sawir leh oo dowladi bixisay iyo lambar sooshal sakuurati (social security) oo shaqaynaya kolka ay u imaanayaan si ay u dhigaatn curaarta.
Waajiblahu sidoo kale waa inuu bixiyaa akhbaartan:
macagiisa, ciwaankiisa hadda, iyo lambarka telefankiisa
Magacaaga, ciwaankaaga, lambarka telefankiisa, lambarka laanta socdaalka (immigration) hadii la yaqaan
Qof aan si sharci ah ku joogin Mareykanka (U.S.) waa INUUSAN isku dayin inuu curaar ka dhigo qof kale. Hay’ada ICE waa ay qaban kartaa qofkaa waxa ayna isku dayi kartaa kolkaa inay ka saaro wadanka Mareykanka (U.S.).
Qof si sharci ah ku joogo wadanka Mareykanka (U.S.) laakiin horey dambiyo loogu helay ama kiisas dambiyo ahi ay ku furan yihiin hadda waa inuu la tashadaa qareen qaabilsan sharciyada laanta socdaalka ka hor inta uusan ka dhigin lacag curaar ah qof kale.
Ka waran hadii aanan dhigi karin curaar?
Hadii aadan dhigi karin lacagta curaarta ah ee laanta socdaalka iyadoo buuxda, waxaa dhici karta inaad caawimaad ka hesho xoolaha curaarta ee beesha. Tusaale ahaan, xoolaha curaarta ee beesha waxaa ku jira:
Xoolaha Xornimada MN MN Freedom Fund
Xoolaha Curaarta Muhaajiriinta Madowga Ah Black Immigrants Bail Fund
Xoolaha Xornimada ee LGBTQ LGBTQ Freedom Fund
Barnaamijka Gargaarka Damaanada Haitian Immigrant Bail Assistance Project
Waxaa sidoo kale jira shirkado curaaradaha dhiga oo iyana ku caawin kara. Shirkadaha curaaradaha waa ganacsiyo gaar loo leeyahay oo bixiya qayb ka mid ah curaarta. Saaxiib ama cid ehelkaa ah ayaa kala shaqeyn kara heshiis iyaga. Ka taxadar! Shirkadaha curaartu waxa ay badanaa dadka saaraan dulsaar aad u sareeya, waydii “rahmida,” lacagtoo dhami kuu soo wada noqonayso. Rahmidu waa shay qiimo leh oo qofka warqadaha saxiixayaa uu ogolaado in shirkada curaartu ay qaato hadii aadan tagin maxkamadaada dhagaysiga dacwada ama aadan u hogaansamin amarada ay maxkamadu ama hay’ada ICE ku tiri raac.
Soo celinta Lacagta Curaarta
Kolka maxkamada laanta socdaalku ay dhamaato, hay’ada ICE waxa ay u soo celisaa cadadkii lacagta curaarta ahaa oo dhamaystiran qofkii dhigay curaarta (waajiblaha). Xafiiska hay’ada ICE waxa uu u diraa warqado waajiblaha si uu u soo buuxiyo una soo celiyo. Kolka hay’ada ICE ay warqadaha la soo buuxiyey loo soo celiyo, waxay boostada u dhigtaa lacagta curaarta ah waajiblaha. Hadii waajiblahu u guuro ka hor inta hawshu aysan dhamaan. Waa inuu hay’ada ICE la socod-siiyaa taa. Hyay’ada ICE ma soo celin karto lacagta hadii aysan hayn ciwaanka waajiblaha.